Transformer Fitzroy Restaurant / Nakhshadda Neefsiga - BILAASH KU SAABSAN
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE Beddelka maqaaxida Fitzroy Restaurant / Breathe Architecture
Transform Fitzroy Restaurant / Neef Naqshad
TELES RELAY 18 July 2019
Clar Peter Clarke
Sharraxaadda ay bixiyeen naqshadeeyeyaasha. Goobtu, oo ay banaanayd sanado badan, ayaa hore u ahaan jirtay warshad beddelka. Dhismaha hadda jira wuxuu lahaa qaabab dabeecad ah waayihii hore, oo ay ku jiraan dayr yar oo qarsoon gadaashiisa bakhaarka ivy-ka, kaasoo fure u ah fikradda naqshadaynta - si loo dheereeyo khibradda beerta gudaha. Fikraddan waxay si buuxda ula xiriirtay ulajeeddada milkiilaha inuu bixiyo khibrad sahlan oo tijaabo ah.
Qaabaynta ayaa leh laba qaybood oo muhiim ah. CABANON + GAROONKA. Beeraleyda hoose ee la taaban karo ee la taaban karo waxay abuuraan “qorsheyaal” goobo cunto ah. Daar alwaax ah oo alwaax daboolan ayaa ku hoos yaal saqafka dhaadheer ee jiifa salka ku haya 'qalabka' dambe ee maqaayadda. Dareenka iyo fudfuditaanka tikniyoolajiyadda ayaa muhiim u ah nashqadeynta cusub si dhexdhexaad ah loogu dhex daro dhismaha jira. Palette qalabka ayaa ah aruurinta agab leh tamar hoose, oo caan ku ah jardiinada. Dhuxusha-alwaaxa, alwaax dib loo rogay, bir khafiif ah, silsilad cyclone ah, xirmooyin naxaas ah oo cayriin, alwaaxyo sibxad leh, kanaalada bannaanka ku yaal iyo dhir farabadan ayaa isu yimid si ay u beddelaan meesha. Martidu waxay cunaan suxuunta khudradeed ee buuxa ee ku yaal cagaarka cagaaran waxayna xasuustaan ​​mid kasta oo ka mid ah moduska modus operandi, taas oo micnaheedu yahay xushmeynta xilliyada.
Koob iyo qorshe
Halkii laga raaci lahaa jidka hilibka la barbardhigo, khudradda waxaa loo soo bandhigayaa sida geesiyaal ah oo saxan kastaa waa dabaaldeg ay ku jiraan khudaarta ugu sarreysa. Farshaxanka ayaa boos u beddelay sida menu-ka u beddeleyso casho iyadoo aan la soo rogin falsafad. Milkiilayaasha Laki Papadopoulos iyo Mark Price of Cunitaanka Panama, Vegie Bar iyo Rice Queen waxay leeyihiin faham weyn goobta Fitzroy oo lahaa aragti adag oo ku saabsan ganacsigooda khudradda cusub ee ku qarsoon gadaal makhaayadoodii hore ee Vegie Bar ee ku taal Rose Street, Fitzroy . Waxay lamid tahay Qudaarta Khudradda, Transformer wuxuu siiyaa liin khudradeed oo buuxa oo ay dhiirrigeliso Bariga Dhexe, Badda Dhexe iyo Aasiya, laakiin macmiilku wuxuu ku talajiray inuu abuuro makhaayad ka casri badan, la safeeyey oo tijaabo u ah walaalkiis albaabka xiga.
Xeeladaha ugu waaweyn ee ESD la adeegsaday waxay ahaayeen:
• Hayso dhismaha jira. Waxaan haynay intii suurto gal ah bakhaarrada jira. Dhammaan wax ka qabadka cusubi waa kuwo fudud ama is-leh markaa dhismuhu si sahlan ayuu ula qabsan karaa mustaqbalka (maadaama horumarka hoteelku guud ahaan leeyahay cimri gaaban oo gaaban).
• Dematerialization. Xarig iska saar / muuji / u muuji. Mar labaad, waxaan wanaajinay dhismaha jira halkii aan ku qarin lahayn lakabyada kore. Dhammaan agabkii lagu daray waxay ahaayeen kuwo adag, fasiraad ah oo loo adeegsaday wax.
• Alaab tamar hoose oo gudaha ah. Meel kasta oo ay suuroggal tahay, waxaan adeegsannay halbeega hodanka ah ee qoraallada dabiiciga ah, oo ay ku jiraan alwaax dib loo warshadaystay (miiska dib loo warshadeeyay ee ka sareeya Geelong Station), alwaax albaab bir jilicsan leh, iyo joodariga, galka albaabo maxalli ah iyo albaabbo bulukeeti, shaashado lagu beero siligyada duufaanta, oo aan qashin qubayska ka imaanaynin.
• Isticmaalka tamarta hooseeya / aaladaha hufnaanta sare Dhamaan guryaha waa la cabiran karaa iyo nalalka cimriga dheer ee LED-ka
• Waxyaabo sun ah oo hooseeya Meelaha dhir, jaranjarooyinka la taaban karo iyo qorsheyaasha la taaban karo ayaa lagu dhammeystiraa iyadoo dhameystirkoodu hooseeyo VOC
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.archdaily.com/921031/transformer-fitzroy-restaurant-breathe-architecture
VIDEO. Jennifer Lopez had iyo jeer ayaa ugu sareeya 50 sano sanadka ...